अब किन चाहियो भियग्रा ? खानुहोस् यी खानेकुरा - Enepali Online
यौनको प्रसंग आउनसाथ धेरैले लुकाउने समस्या हो, यौनमा असन्तुष्टि । यस्तो असन्तुष्टि किन हुन्छ ? मनोविद्हरुले यसका केहि साझा कारण खोतलेका छन् । यसमा मानसिक कुरादेखि हर्मोनल गडबडीसम्म हुनसक्छ ।
यौन असन्तुष्टिको चर्चा गर्नसाथ धेरैले भन्छन्, यौन उत्तेजना नै भएन । आफु वा आफ्नो पार्टनरमा यस्तो समस्या भएपछि धेरैको यौनजीवन खल्लो हुने गर्छ । अब के गर्ने त ? यौन उत्तेजनाको लागि हामी भियाग्रा सम्झन्छौं । भियग्राले पुरुषहरुको ‘इरेक्सन’ बढाउन प्रभावकारी काम गर्छ । तर, यौन उत्तेजना बढाउनका लागि भियग्राकै सहारा लिनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रै भान्सामा हुने विभिन्न खानेकुराहरुले भियग्राको जस्तो काम गर्न सक्छन् । यहाँ अनलाइनखबरले ती खानेकुराहरुबारे जानकारी गराउँदैछौं ।
केरामा ब्रोमेलिन नामक इन्जाइम हुन्छ जसले प्राकृतिकरुपमा सेक्सको इच्छालाई बढाउँछ । केरामा पोटासियम र म्याग्नेसियम लगायत अन्य कैयन् पोषक तत्व पनि हुन्छन् जसले कामवासना बढाउनका साथै अरु पनि थुप्रै फाइदा पुर्‍याउँछ ।
भियग्राजस्तै काम गर्ने खाद्य पदार्थको सुचीमा अलैंची सबैभन्दा अगाडि आउँछ । अलैंचीमा सिनेओले नामक एक यौगिक हुन्छ जसले जनन्दि्रयमा रक्तप्रवाहलाई बढाउँछ । यसले गर्दा कडा इरेक्सन प्राप्त हुन्छ ।
किसमिसले पनि सेक्स ड्राइभलाई बढाउँछ । किसमिसको सेवनबाट कैयौं प्रकारका यौनजन्य समस्या, जस्तै इरेक्टाइल डिसफङ्सन आदिबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसले शरीरमा उर्जा बढाउनुका साथै सेक्सको समयमा पनि सहयोग गर्छ ।
अनारले स्वास्थ्यलाई दिने अनेकन फाइदाका अलावा यसलेउ भियग्राको जस्तो काम पनि गर्छ । अनारले रगतको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्छ र यसलाई जनन्द्रीयतर्फ लैजान्छ । कामोत्तेजक समयका लागि यो एउटा चमत्कारी फल हो ।
कडा इरेक्सनका लागि ड्राइ प|mुट्सलाई सँधै उपयोगी मानिदै आएको छ । यिनीहरुमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड र भिटामिन बी ३ हुन्छन् जसले शुक्राणुहरुको क्षमतालाई बढाउँछन् र पुरुषको यौनाङ्गमा रक्तप्रवाह बढाउँछन् ।
हालै गरिएको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ कि तरबुजा पनि भियग्रा जस्तै प्रभावशाली हुन्छ । तरबुजको टुक्रामा यसको बोक्राको ठिक मुनि हरियो रंगको जुन भा छ त्यसमा सिट्रुलाइन प्रचुर मात्रामा हुन्छ । सुट्रुलाइन शरीरमा अर्गानिक नाइट्रिक एसिड बनाउन सहायक हुन्छ । नाइट्रिक एसिड एक सिद्ध योगिक हो जसले पुरुषहरुमा यौन आकांक्षालाई बढाइदिन्छ र इरेक्सनलाई बलियोउ बनाउन पनि सघाउँछ ।
बलियो इरेक्सनका लागि अन्डा एउटा उत्कृष्ट आहारा हो । यसमा भिटामिन डी, बी५ र बी६ हुन्छ । यी सबैले प्रभावकारी रुपमा सेक्सको इच्छा जागृत गर्न भूमिका खेल्छन् जसले गर्दा आफ्नो साथीसँग उत्तेजित समय बिताउन सकिन्छ ।
भिटामिनबाट समृद्ध भएकाले पालुंगोलाई विश्वभरमै स्वास्थ्यका लागि उत्कृष्ट खाद्यपदार्थ मानिएको छ । पालुंगोले पनि भियग्राको जस्तो काम गर्छ । यसमा आइरन, म्याग्नेसीयम र भिटामिन ई हुन्छन् जसले गर्दा यसले योन इच्छा बढाउन सहयोग गर्छ ।
Previous Post Previous post: यसरी मिल्यो कुरा : ओली प्रधानमन्त्रीसहित सर्वोच्च नेता, प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष !
Next Post Next post: ६ दाजुभाइकी एक्ली बहिनीलाई श्रीमानले शरीरमा मट्टीतेल छर्किएर आगो लगाई श्रीमतीको हत्या गरे हस्पिटलमै परिवारको रुवाबासी (भिडियोसहित)
गुन्डा नाइके मनोजलाई लाग्यो दुर्गा तिवारीको आमाको श्राप। पूरा भयो नेताहरुको कसम नोट: माथी उल्लेखित भिडियोसँग सम्बन्धित जानकारी विभिन्न सामाजिक संजाल तथा युटुबमा प्रस्तुत भिडियोको आधारमा तयार पारिएको हो। पाठकलाई जानकारी दिने उदेश्यले उक्त भिडियोहरु यहाँ प्रस्तुत गरेका हौ। कुनै पनि भिडियो सम्बन्धि सत्य, तथ्य र यथार्थको लागि सम्बन्धित भिडियो प्रस्तुतकर्तासँग सम्पर्क गर्नुहोला। Sharing is caring!FacebookTwitterGoogle+Pinterest41shares